Madoobe, Xidig iyo Seeraar oo heshiis gaarey & Farmajo oo meel cidla ah looga tagay. - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Madoobe, Xidig iyo Seeraar oo heshiis gaarey & Farmajo oo meel cidla...
Madoobe, Xidig iyo Seeraar oo heshiis gaarey & Farmajo oo meel cidla ah looga tagay.
Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, siyaasiyiinta Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa heshiis ku gaarey caasimada Kenya ee Nairobi, sidda loo xaqiijiyey MOL.
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay MOL in dhinacyadda ay kala saxiixdeen heshiiska oo lagu soo afjarayo khilaafkii siyaasadeed ee ka dhaxeeyay.
Munaasabad qorshuhu ahaa in lagu shaaciyo isla markaana lagu soo dhaweeyo heshiiska taas oo ka dhici lahayd magaala madaxda Kenya ayaa loo baajiyey sababo la xiriira ka hortagga faafitaanka Coronavirus.
Xidig iyo Seeraar ayaa kamid ah xubnihii mucaaradka Jubaland ee joogay gudaha magaala madaxda ku meelgaarka Kismaayo ee kasoo horjeestay dib-u-doorashada madaxweyne Axmed Madoobe.
Sidda ay xogta muujineyso, qodobada heshiiska ku jira waxaa kamid ah in ay aqoonsadaan doorashadii ka dhacday Kismaayo ee uu kusoo baxay Axmed Madoobe isla markaana ay si buuxda ula shaqeeyaan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo diidey in ay la shaqeyso maamulka Axmed Madoobe ayaa lagu eedeeyay in ay faragelin ka wado gobolka Gedo si ay halkaas uga hirgeliso maamul daacad u ah.
Mareykanka iyo qaar kamida dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya oo taageero u muujiyey Axmed Madoobe ayaa sheegay in talaabooyinka Villa Soomaaliya ay fursad u abuurayaan Al-Shabaab oo halis ku ah amniga qaranka.
Previous articleFarmajo blamed for ‘conspiracy’ to block Somalia’s elections
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo kulan la yeeshay Madaxa Ururka Midowga Yurub
Contact us: mu[email protected]